“Maalinteydii Ugu Horeysay Ee Liverpool Waan Matagay Laakiin Wixii Uu Igu Sameeyay Jurgen Klopp Ayaa Iiga Xanuun Badneyd” - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha “Maalinteydii Ugu Horeysay Ee Liverpool Waan Matagay Laakiin Wixii Uu Igu Sameeyay...
“Maalinteydii Ugu Horeysay Ee Liverpool Waan Matagay Laakiin Wixii Uu Igu Sameeyay Jurgen Klopp Ayaa Iiga Xanuun Badneyd”
Andy Robertson ayaa shaaca ka qaaday inuu matagay maalintiisii ugu horeysay ee Liverpool laakiin waxa uu sheegay inay uga xanuun badneyn hadal uu ku yiri tababare Jurgen Klopp.
Daafaca bidix ee Scotland ayaa ka soo wareegay kooxda Hull City bishii July 2017, waxaana durbadiiba la geliyay tababar adag oo uu u dulqaadan waayay.
Klopp iyo shaqaalihiisa tababarka ayaa lagu yaqaanaa inay ciyaartoyda geliyaan tababar adag oo lagu tijaabinayo taam ahaanshahooda ka hor inta uusan xilli ciyaareedka bilaabanin taasoo uu u adkeysan waayay Robertson.
Wuxuu u sheegay barnaamijka Peter Crouch: “Maalintii aan saxiixay waxaa la igu soo wareejiyay garoonka ka dibna waxaa ii bilaabatay howsha.
“Laakiin waxaan xusuustaa maalintii iigu horeysay waxaan aheyn lix ama todoba sababtoo ah waxay aheyd ka hor bilowga xilli ciyaareedka, Danny Ings ayaa markaas dhaawac ka soo laabtay.
“Waxaan sameyneynay tababar tijaabo oo ay Jarmalka jecel yihiin taasoo ah inaad orodo intii awoodaada ah.
“Waxaan la ordayay Danny Ings, waxaana ahaa mid ku xanuunsanaya meel walba. Xaqiiqdii jir ahaan ayaan xanuunsanayay.”
Tababarada ka horeeya xilli ciyaareedka waa kuwa adag iyadoo Liverpool ay ciyaartoydooda ku riixdo wax aysan xamili karin si ay isagu diyaariyaan xilli ciyaareedka madaama ay ciyaaraan kubad raacasho badan.
Robertson ayaa hadalkiisa raaciyay: “Waxay garoonka tababarka sureen tiirar oo ay tahay inaad gaarto ka hor inta uusan seeriga yeerin, mar walbana waa inaad ka xawaare badan tahay sidii hore.
“Tijaabadeydii caafimaadka waxay qaadatay labo maalmood sidaasi darteed wax badan ma aanan cunin, sidaasi darteed waxaan ahaan mid aad u daalan.
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 8-5-2020